Visa Services - Mamirioni Vagadziri
Kubatsira kweVisa kwe
Isu tinopa mhinduro dzakagadzirirwa iwe pachako, mhuri, mabhizinesi madiki, makuru emakambani epasi rose anoshanda zvakanyanya kwauri.
Yedu huru Services
Yedu Yakakosha Services Yakanangana neVisa Rubatsiro
Sarudza Nyika yeVisa Services
Nyika dzeVisa Dzepamusoro
Tourism & Bhizinesi
Vatorwa vanoenda kuArgentina kweyekushanyirwa uye nekuda kwebhizinesi vanopihwa vhiza yemazuva makumi mapfumbamwe kana wasvika, uye havafanire kunyorera visa risati yasvika. saka ita chokwadi chekutarisa kune yako nyika yeArgentina Embassy kana Embassy usati waita rwendo urwu chero rumwe ruzivo rungawanikwa kubva kuArgentina Ministry of Interior Affairs.
Iwe unogona chete kunyorera ichi vhiza kana iwe wakanyoresa mune dzidzo nzvimbo muArgentina uye zvakabvumidzwa neDhipatimendi rekupinda muArgentina. Zvinowanzo shanda kusvikira makosi auri kutora ave apera zviri pamutemo, uye asingakwanise kuvandudzwa.
Akapihwa Vashandi Visa
Visa iyi ndeyevanhu vari kuronga kugara muArgentina uye vanoshandira imwe kambani yeArgentina iyo yakanyoreswa nehumisheni yekushanya, uye vakapiwa mvumo yekushandisa vashandi vekunze Nguva zhinji, unogona kunyorera vhiza iyi usati kana wapinda munyika.
Chero ani zvake anogona kuratidza yakavimbiswa mari yepamwedzi yemadhora mazana masere nemakumi mana emadhora iyo yakaenzana nemadhora mazana maviri nemazana maviri emadhora Chero bedzi muenzi anogona kupa magwaro anoratidza kuti mari yacho ichaenderera mberi vachiri kugara muArgentina, vanogona kunyorera visa yeMari.
Kunyorera vhiza yePensioner, sekureva kweVane mari, munhu anofanirwa kuve nemari shoma yekunyorera visa rePensioner zvinoda kuti iwe uratidze hushoma hwemwedzi uno hwemadhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe emadhora (US $ 8,500 USD). Iyo mari inofanirwa kuiswa mune chero bhangi reArgentina.
Zvinyorwa zvinowanzo bvunzwa kana uchinge uchinge uchinge uchishandisa ndezvi:
Pasipoti nekubvumidzwa kweinenge mwedzi mitanhatu mushure mekusvika
Chimiro chekushanda chakakwana
Makumi mana achangobva kuyerwa-size mapasita mapikicha
Round trip tikiti rekuchengetedza
Reservation hotera kana tsamba yekukoka kubva kushamwari kana mhuri inogara Argentina
Chekubhadhara chekiresi yekubhadhara chikumbiro
Hufakazi hwemari kana iye anenge achikumbira anogona kuzviriritira
Mamwe magwaro aunogona kukumbirwa anosanganisira: gwaro rekuzvarwa, gwaro rekutanga remuchato, gwaro rekutanga rekurambana (kana paine), chero zvinyorwa zvekushandurwa kwezita, nezvimwe. kuburitswa kwavo, ndokuzoshandurirwa muchiSpanish uye pamutemo nedare reArgentina.
Vese vagari veEuropean Union
Varidzi vemapasipoti enyika dzinotevera vanofanirwa kushandisa Chitupa chekufamba chakapihwa neArgentina pachinzvimbo chechivhiza kana uchifamba:
Sarawi Arabhu Demokiratiki Ripabhuriki
Zvinofanira kutaurwazve kuti kune zvizvarwa zveBolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay neVenezuela nzira yekuwana mvumo yekugara kwenguva pfupi iri nyore, yakapusa uye isinganetsi. Izvi zvinogona kuitwa kunyange kuburikidza neArgentina Consate kunze kwenyika kana muArgentina. Mvumo yacho inogara kwemakore maviri, uye inokwanisa kuiswazve.